पुस २८, २०७४| प्रकाशित १२:३४
'चुलभुलले चुनाव नै जिते जस्तो गर्छन् त हो थारुहरु', एउटा साथीले बडो नमज्जाले भन्यो।
'अचेल त थारुहरु त्यसै निहुँ खोज्छन् त हो!' अर्कोले थप्यो।
'किन?', मैले सोधेँ।
'आज त्यसको घरमा रामलीला देखाउने रे', उसले अमिलो मुखले मीठो कुरा सुनायो।
मैले खुसी हुँदै भने, 'त्यसो भए त हेर्न जानुपर्छ।'
'बेबिका पनि आउँछे होली नि?' मैले सोधेँ।
'आउँछे होली', उसले अलि शान्त स्वरमा भन्यो।
'अर्काकी स्वास्नी हो, अब चैं विचार गरेस्', उसले नै भन्यो। कोठामा अलिकति हाँसो गुञ्जियो।
अर्कोले थप्यो, 'हुन नसकेकी वार्ड अध्यक्षकी छोरी हो, याने कि अर्को पालिकी वार्ड अध्यक्ष।' हाँसोले उग्र रुप लियो। त्यो हाँसोमा मेरो हाँसो पनि सामेल थियो।
साथीले ओठ मिठ्याउँदै फेरि थप्यो, 'बच्चा जन्मेपछि झन् राम्री भएकी छे यार!'
'को?' मैले सानो जिज्ञासा राखेँ।
'बेबिका', उसले छोटो उत्तर दियो।
'है!' भन्दै म चुप लागेँ।
फेरि उसले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, 'तेरी त लीला हो नि बेबिका, तँ त जान्छस् होला नि?'
एउटा सानो उपकथा छ, कसरी रहन गयो थरुनीको नाम 'बेबिका'। त्यो विस्तारमा भन्नेछु।
बेबिकाका बा-आमा हाम्रो घरमा कमैया थिए। मैले सुने अनुसार मभन्दा ठीक एक महिना अगाडि बेबिका जन्मेकी थिई रे। आजसम्म पनि बेबिका मलाई 'बाबु' नै भनेर बोलाउँछे र उसले मेरो नाम लिएर मलाई बोलाएको याद छैन। तर, मैले बेबिकालाई दिदी भनेर बोलाएको मलाई याद छैन। ऊ मेरा लागि बेबिका हो। उसका लागि म 'बाबु' हुँ।
बेबिकालाई र मलाई उसकी आमा 'बड्की' ले नै हुर्काई। मेरा बा-आमाले मलाई हुर्काउने जिम्मा बड्कीलाई नै दिएका थिए रे। बड्की हामीलाई नाङ्गै पार्थी र नुहाइदिन्थी। त्यो दिनसम्म नाङ्गै नुहाइ दिई, जुन दिनसम्म हाम्रो परिचय लाजसरमसँग भएन।
हामीलाई एउटै नलको पानीले नुहाइन्यो्ग। फरक यति हो, मेरो जिउमा साबुन लगाइन्थ्यो, बेबिकाकोमा पिना। सम्झनलायक कुरा के हो भने, कहिलेकाहीँ बड्कीले मेरा आमाबुबाको आँखा छलेर बेबिकाको जिउमा पनि साबुन दलूँ भनेर मलाई सोध्थी। म टाउको तलमाथि गर्थेँ र 'हुन्छ' भन्थेँ। साबुनले नुहाएको दिन बेबिका भकारीमा झुन्याध्एको ऐना दिनमा तीन-चार पटक हेर्थी।
बेबिकाले ममाथि एउटा आरोप लगाउँथी, 'तै साबुन से नुहाके गोहर हुइले।'
अनि ममाथि बेबिकाले अर्को आरोप थपी, 'तै प्याकेट के नुन खाके चलाख हुइले।' उसले आफैंले दुश्मनीको मात्रा बढाएकी थिई। मैले ऊमाथिको गोदाइको मात्रा बढाउनैपर्ने भो।
फेरि त्यही साथीले सोध्यो, 'तैंले बेबिकालाई त्यसै त छोडिनस् नि?'
साथीले भनिहाल्यो, 'के छाड्दो होस्!
नैतिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षाले मलाई समयभन्दा चाँडो जवान बनाइदिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षा मेरा उमेरका सबै साथीको विशेष रुचिको विषय थियो, किनकि विषय नै रुचिकर थियो। यौन शिक्षा भन्ने पाठले एउटा सभ्य भाषा सिकाएको थियो- 'यौनसम्पर्क'। तर, गाली गर्दा यो सभ्य भाषा आजसम्म काम आएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षाको असर ममाथि यतिविघ्न थियो, म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षाभित्र राखेर बजारमा पाइने अनेकथरी 'डाँफे' बुक पढ्थे। ती 'डाँफे' बुक उपल्ला कक्षाका दाइहरुबाट झिसमिसे अँध्यारोमा पढ्नका लागि मात्र दिइन्थे।
बेबिकाले टाउको घुमाएर पछाडी हेरी। तर, केही बोलिन। केहीबेरमै मतिर हेर्दै भनी, 'बाबु, आघे जाके बैठी।'
उसको नाजुक प्रस्तावलाई मैले सीधा इन्कार गरिदिएँ। उसले अलि दृढ भएर भनी, 'बाबु, आघे जाके बैठी टो ठीक बा, नि टो मै घरे जाइटु।'
'जाने भए जा न त। म त कहीँ जान्नँ', मैले भनेँ। बेबिकाले मलाई एक पल्ट पुलुक्क हेरी अनि आफू चाहिँ अलि अगाडि गएर कोचिँदै भुइँमा बसी।
गेम शो गरिदिएँ। साथीहरुका आँखाले उही पुरानी प्रश्न गरिरहेका थिए, 'फेरि पत्ती चोरिस्?'
मैले हाँस्दै जवाफ दिएँ, 'आयोडिन नुन खाने गर केटा हो! चनाखो भइन्छ।'
झिसमिसे अँध्यारो भइसकेको थियो। साथीहरुको साझा प्रस्ताव आयो, 'खाना खाएर फेरि खेल्न आउने।'
खेल्ने प्रस्ताव विपरीत मैले भनेँ, 'म चैं रामलीला हेर्न जाने हो।'
एउटा साथीले भन्यो, 'सीधा भन् न, बेबिकालाई भेट्न जाने हो।'
अर्कोले भन्यो, 'नजा हो, अचेल चुलभुललाई तपाईं भन्नुपर्छ।'
हाँस्दै मैले सोधेँ, 'किन तपाईँ भन्नुपर्छ र तेसलाई?'
उही साथीले जवाफ फर्कायो, 'पहिले पो हाम्रो कमैया थियो, अचेल त हुन नसकेको वार्ड अध्यक्ष हो नि!'
'तँ पनि तपाईं भन्छस्?', मैले उसैलाई प्रश्न तेर्स्याएँ।
'म त भन्दैन मु*लाई, चुनावको बेला चैं चुलभुल सर भन्थेँ। के था कतै मु*ले जितिदिएको भए?'
मैले चाख लिँदै सोधेँ, 'अचेल के भन्छस् त?'
'अचेल चैं तिमी भन्दिन्छु, खुसी हुन्छ जाँ* !'
चुलभुलको आँगनमा सिएफएल चिमको उज्यालो छरिएको थियो। म आँगनमा पुग्नासाथ चुलभुल बोल्यो, 'बाबु, राम राम बाबु!'
'नमस्ते चुलभुल सर।'
'मिझ्नी खाइलो कि नाइ बाबु?'
'नाइ खाइले हुइबो हो टो एहोरी खाइ।'
'खाइसकेँ हो, खान्नँ।'
'इत्ति' भन्दै उसले थोरैको इसारा गर्योम।
'छाड्देऊ न हो।'
'रुको बाबु' भन्दै बेबिकाको स्वर सुनियो। उसको हातमा गुन्द्री थियो। मुखमा दाँत माझ्ने ब्रस थियो।
'अरे वाह! ब्रस गर्दै छस् त', बस्दै अलिकति जिस्काउँदै भनेँ।
'आज सिकार खाइल उहि मारे।'
'अनि आजभोलि के गर्छेस् त नि?'
ऊ केही बोलिन। चुलभुलले अछामीमा बोल्यो, 'टीकापुर एक बोर्डिङनौ काम हद्दी छु भन्नी छिइ।'
'तेरो पोइल त्यतै होइन र?'
त्यसपछि हामी सँगसँगै ब्रस गर्ने गर्थ्यौं। यो अलग कुरा हो, आमाले बेबिकालाई आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, 'बेबिका टुथपेस्ट खाएर सक्छे।'
बेबिकाले फेरि आग्रह गरी, 'बाबु, सिकार खिबो?'
'केको हो?', मैले सोधेँ।
'मजाक नाइ करो बाबु। टु बुंगुरके सिकार कब्बु नाइ खिबो।'
'बुंगुरको भए खान्थेँ, खसीको त घरमै खाएर आको', मैले हाँस्दै भनेँ।
फेरि चुलभुलतिर हेर्दै हाँस्दै अछामीमा भनेँ 'बड्डाउ, थोक्काइ नभए वार्ड अध्यक्ष भैजाने रैछौ त!'
उसले हाँस्दै अछामीमा भन्यो, 'आफ्नाइले भोट हालेन्न।'
'कसले हालेन र?'
'टीकापुर घटनाले चिड्को पाड्यो।'
मैले फेरि हाँस्दै भने, 'के भन्छस् हो चुलभुल?'
'परार माप राडी लड्या त, यही साल मैकी घाटा लाग्यो।'
मतिर हेर्दै उनीहरुमध्येको एउटाले सोध्यो, 'यी कौन मनैया हो?'
'हामार बाबु हे, एहर आघे घर बा।'
'के कर छावा हो?'
उसले प्याच्च मुख छोड्यो, 'बुर चोदिक पर्बटिया! डोटेल झाट हामार सक्कु घर जलाइदेटो!'
'बाबु, बाबु, तमि कुडा त सुन।'
म टक्क अडिएँ र भनेँ , 'भन्, के भन्न आको होस्?'
'बाबु , ती मेरा जवाइँ हुन्, परार टीकापुर घटनामा तिनको पनि घर जलाइदिए। ती आफू भागेर बम्बै छिया। यही दशैंका लागि अस्ति आका हुन्।'
मैले बेबिकातिर हेर्दै भनेँ, 'अनि थोडै मैले जलाएको हुँ र तेरो घर?'
'बाबु, रक्सी खाए बेला मान्छेको बुद्धि गु खान गएको हुन्छ। बाबु तम्रा खुट्टामा ढोग छ। केहि लफडा नहरे है', चुलभुलले एकै सासमा यति भन्यो।
'अनि तैंले बिहे कहिले गरेकी थिस् नि?' मैले बेबिकालाई सोधेँ।
'तै साल जेठमा बिहा भया छियो, पछे भदौ त त्यसो भैगो। त्यसपछि बेबिका टीकापुर गयाकी छैन, यहीँ छ।'